Uyavela osolwa ngengozi eyabulala uSimba Mhere | News24
Uyavela osolwa ngengozi eyabulala uSimba Mhere
Cape Town - Owesilisa okusolwa ukuthi nguye owayeshayela imoto eyashayisa ekalowo owayengumethuli weTop Billing, uSimba Mhere, kulindeleke ukuba avele eNkantolo yeMantshi yaseRandburg ngoMsombuluko.
UPreshalin Naidoo, 21, uvele okokuqala enkantolo ngasekuqaleni kwale nyanga ngecala lokubulala ngokungenhloso.
OLUNYE UDABA: Uzobekwa icala odale ingozi ebulale uSimba
Icala lakhe kulindeleke ukuthi liqale ukuqulwa ngo-Agasti.
UMhere wayeshayela kuWilliam Nicol Drive, enyakatho neGoli, ngesikhathi eshayiswa yimoto ngabo-05:00, washona nomngani wakhe omkhulu uKady Shay O’Bryan.
Umufi, 26, wajoyina iTop Billing ngemuva kokunqoba umncintiswano wokuvundulula amakhondo ngo-2010.